Nhau - Chii chaunofanira kuziva nezve yekurara pasi?
Imba yekurara inogona kuve yakakosha lebensraum muhupenyu hwedu. kunyangwe kana kwete marongerwo eimba yekurara ari akadhura anogona kuve nemhedzisiro pane chiyero chezororo revanhu, zvobva zvabata hupenyu hwevanhu, basa nekudzidza. saka zvakadaro zvakadaro imba yekurara inofanirwa kugadzirwa kana yagadziriswa?
Saka unosarudza sei pasi pemba yekurara? Tsvagiridzo inoratidza kuti vanhu vanopedza hafu yenguva yavo mubhedhuru. Hunhu hwemamiriro ekurara haana kungoenderana nehunhu hwevanhu hwekurara, asiwo zvinokanganisa hutano hwevanhu. Nekudaro, iyo yekurara yekurara inofanirwa kuve eco-inoshamwaridzika uye isiri-inosvibisa zvinhu; nzvimbo Kune emakamuri ekurara madiki kana asina mwenje, unogona kusarudza pasi rine mavara rinozoita kuti nzvimbo iratidzike kukura uye kupenya.
WPC Vinyl Mapuriro Surperiority:
1.Raw zvinhu zviri 100% nharaunda chengetedzo
Iyo yakasvibirira yepasi pedu ndeyemhando yepamusoro PVC resin inova yezvakatipoteredza, isiri-chepfu uye inogadziriswazve zviwanikwa, haina zvinhu zvinokuvadza senge benzene, formaldehyde, inorema matal, hapana yakanyungudika isina kugadzikana nyaya, isina radiation.
Yedu pasi ine yakakosha skid kuramba, yekupfeka-inodzivirira yepasi uye ichienzaniswa neyakajairika pasi zvinhu, Yedu pasi kukwirana kwakakwirira kana kwanyorova.
3.Antimildew uye Antibacterial Floor
Yedu pasi pevhu kuburikidza neakakosha antibacterial, anti fouling kugadzira, vane simba rakasimba rekuuraya mabhakitiriya, inhibit bacteria kubereka.
4.Inodziya uye Inonyaradza
Pasi redu rakapfava, rinoshanduka-shanduka, kuita kwakanaka kwekushisa kwekushisa, kupisa zvakaenzana, kufamba musina shangu pasiti pedu kunonzwa kudziya uye kugadzikana.
5.Waterproof uye Dampproof
Chinhu chikuru chepasi pedu ivinyl resin, vinyl resin haina appetite nemvura, uye haizoitike mildew nekuda kwehunyoro hunyoro.
6.Ishani Yakaonda uye Chiedza
Yedu yepasi ukobvu 3.2mm -12mm, huremu 2-7.5kgs / sq.m., Isingasviki gumi% yezvakajairwa pasi zvinhu, ine mikana isingaenzanisike mumutoro uye nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo yekukwirisa, ine zvakare mukana wakakosha muchivakwa chekare. kuvakazve.
kana uchida WPC Vinyl Flooring Mutengesi, unogona kutitumira meseji.